2mztaunggyi: IOS 8 အတွက်ပြင်ဆင်နေပါပြီတဲ့ဗျာ။2014 မှာ IOS8 နဲ့လန်းမယ်။
iOS 8 ရမယ့် Drive တွေကတော့
iPad 4, iPad 3, iPad mini 2, iPad mini တွေအတွက်ထွက်ရှိလာတော့မှာပါ။ Beta Version
အရင်ထွက်ရှိလာမှာပါ. လောလောဆယ်ကျွှန်တော်တို့ IOS 7.0.4 ပဲရှိပါသေးတယ်။ 7.1.4 ထိထွက်ရှိအုန်းမှာပါ။ IOS7 မှာ jailbreak ရဖို့ developer တွေအနေနဲ့ firmware အရေးသွေးလုပ်ဆောင်
ချက်တွေကို လေ့လာနေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် jailbreak မထုတ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ firmware လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမှသာလျှင် jailbreak ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ကျွှန်တော်တို့ IOS 8
Downgrade From iOS 8 Beta 1,2,3,4,5,6 to iOS 6.1.3/6.1.4 (iPhone 5) or Update From iOS 8 Beta 1,2,3,4,5,6 to iOS 8 GM.
We recommended – downgrade from iOS 8 to iOS 7.1.3/7.1.4. Why? Many people are running iOS 8 beta, but many of those users are also unaware that these iOS 8 betas have an expiration date.
b) NO! —> Stay on iOS 7.1.3 or iOS 7.1.4 (iPhone 5). If you stay on iOS 7, you will find the iOS 8 release as an Over-the-Air update starting on September 2014.
နောက်ထပ် တခု ထူးခြားလာတာကတော့ ကျွှန်တော်တို့ အရင်က IOS တွေမှာ Itunes တို့ Itools
တိ်ု့မရှိရင် ဓါတ်ပုံတွေကူးယူထုတ်ယူဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလှပါဘူး။ အခု IOS 8 plan မှာ
Mac မှာဆိုရင်လဲ ဓါတ်ပုံအလွယ်တကူသွင်းယူထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။ window သုံးတဲ့သူတွေအတွက်လဲ
My computer ကနေ ကျွှန်တော်တို့ စတစ် တွေ ကူးသလိုမျိုး Copy / paste နဲ့ကူးယူလို့ရနိုင်ပါပြီ။
ကဲ IOS ပရိတ်သတ်များစောင့် မျှော် ကြည့်ပါအုံး။
Ref; IOS development